About Us – Gadget Pro Myanmar
Gadget Pro is founded in Myanmar in June 2020 with the intention of fulfilling and satisfying customers’ needs of IT gadgets & accessories in one place.
We deliverawide range of IT gadgets & accessories which include power banks, earphones, car chargers, backpacks, handbags, keyboards, mouse, USB hubs andalot of cool stuffs.
Our price range is from premium price to affordable price.
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေ ဝင်တဲ့ ပေါပေါပဲပဲတွေ၊ အတုအပတွေ အရမ်းများပါတယ်။
IT Gadgets & Accessories ထဲမှာဆိုရင် APPLE Cable လေး Original လိုချင်တယ်ဆိုပါဆို့… တကယ့် အမှန်အကန်ဆိုတာ အရမ်းရှားပါတယ်။ Third Party Certified Brand တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေအထားတစ်ခုကြောင့် စီးပွားရေးဆန်ဆန် သွင်းရောင်းမယ်ဆို မကိုက်ကြတော့ သွင်းတဲ့သူကလည်း အတော်နည်းပါတယ်။
တကယ့် IT Gadgets & Accessories Brand အစစ်အမှန်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုရောင်းချပေးချင်တာရယ်၊ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အထိုက်အလျောက် နာမည်ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ IT Gadgets & Accessories Brand တွေကို ရောင်းချပေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Gadget Pro ဆိုတာ ဖြစ်လာရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းထားတဲ့ Brand များကိုလည်း တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှာ ဖြစ်သလို၊ တခြား Brand များနဲ့လည်း လက်တွဲပြီး After Sales Service အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်မှုတွေကို လိုလားခဲ့တဲ့၊ ကိုယ်တိုင်လည်း customer တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ….
Gadget Pro Myanmar
"We can elevate our lifestyle and productivity with various gadgets if we use them accordingly."
"We can see that smartphones influence our lifestyle. So, gadgets are also good companion for our smartphones."
"ကွန်ပြူတာပဲသုံးသုံး၊ ဖုန်းပဲသုံးသုံး၊ ကင်မရာပဲသုံးသုံး အဲ့လို ပစ္စည်းတွေအတွက် accessories တွေကတော့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။"
ပစ္စည်းတွေကတော့ ဘယ်ကဝယ်ဝယ် ဝယ်လို့ရပါတယ်။ အဓိက ကျတဲ့ After Sales Service ကတော့ customer တွေကို ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်နိုင်လဲပေါ် မူတည်တယ်။